အမျိုးသမီးများ, တုန်ခါမှုနှင့်တုန်ယင်လိင်သုတေသန (2013) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတူးဖော်ရေးဒဏ်ငွေစိတ်ကူးဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပိုလျှံလက္ခဏာလျစ်လျူရှု စိုးရိမ်. ငါတို့သည်ယင်း၏သက်ရောက်မှုသုတေသနအကြောင်းကိုကိုယျ့ကိုယျကိုနှင့်အတူအခြေခံကျကျရိုးသားဖို့လိုပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကစုံတွဲလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်မရေးသားခဲ့သည် တုန်ခါမှုနှင့်အခြားအပျော်အပါးများ - 'Moderation' မအောင်မြင်သောအခါ။ ၎င်းတွင်အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်အစီရင်ခံစာများပါ ၀ င်သောကြောင့်တုန်ခါအသုံးပြုခြင်းသည်ကစားစရာများမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံစဉ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရန်အခက်အခဲ (သို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်) ဖြစ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကငါရာပေါင်းများစွာမှတဆင့်စစ်ဆေးပါတယ် အမြိုးသမီးမြား၏ရေးသားချက်များ တစ်ဦးအပေါ် ဖိုရမ် ဘယ်မှာလူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းဖို့ (သူတို့ရဲ့အမြင်၌) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-များသောအားဖြင့်အလွန်အကျွံအပေါ်ပြန်ဖြတ်တောက်ပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကတခြားလိင်အကူအညီအထောက်အပံ့များကို အသုံးပြု. စမ်းသပ်နေကြသည်။
အလားတူဖြစ်ရပ်ဆန်းသည်ဤအမြိုးသမီးမြားအကြားပေါ်လာနေသည်။ စစ်မှန်သောလိင်နှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းပင်လျှင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်ကစားစရာများကြောင့်အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်နေသောဖြစ်ရပ်များကိုလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးသွားရသည်။ အချို့အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏လိင်ဘဝများကျင့်သုံးသည့်တစ်လမ်းသွားလမ်းကြောင်းကိုမနှစ်သက်ကြပါ။
ပထမဆုံးအမျိုးသမီး: “ ကျနော့်ရဲ့အကြီးမားဆုံးပြproblemနာကတုန်ခါမှုကိုသုံးပြီးငါ့ရဲ့ထိခိုက်လွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတယ်။ လုံးဝငါ့အ vibrator ထွက်ပစ်ချ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အစားထိုးရန်ကြိုးစားနေသောကြောင့်တုန်ခါနေသောအိမ်အတွင်းရှိအရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ရသည်။ Goodbye Sonic-Care မျက်နှာသန့်ရှင်းရေးကိရိယာ။ လိင်ကပိုကောင်းတယ်။ မေးခွန်းမရှိပါဘူး ကျွန်တော့်ရဲ့အစေ့ဟာအခြေခံအားဖြင့်ဘက်ထရီမရှိတဲ့အရာအားလုံးအတွက်သေနေပြီ။
ဒုတိယအချက်အမြိုးသမီးတ: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခြောက်သွေ့အောင်လုပ်တာကငါ့ကိုချိန်းတွေ့တာကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏အခန်းများကိုညစ်ညမ်းသောအရုပ်များဖြင့်မထားသင့်ပါ။ ခြောက်သွေ့တဲ့လက်နဲ့အထက်တန်းကျောင်းတက်ချင်ပါတယ်”
တတိယမိန်းမ "ကျွန်တော်ဖတ်သည် hentai အတော်လေးနည်းနည်းနှင့်နေ့တိုင်းနီးပါးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေ။ ကျွန်တော်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ် ကျွန်တော့်ရဲ့တုန်ခါမှုမှကျွန်တော့်ရဲ့အစွမ်းအရသိသိသာသာဆုံးရှုံးသွားတယ်။
ဒီဧရိယာအတွင်းသုတေသနအကြောင်းကိုစပ်စုငါ Kinsey Institute မှဖွငျ့ဤလေ့လာမှုမှညွှန်ကြားခဲ့သည်: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အမျိုးသမီးများအားဖြင့်တုန်ခါအသုံးပြုခြင်း၏လက်ခဏာ: တစ် National ကိုယ်စားလှယ်လေ့လာမှုကနေရလဒ်များမရ။ အမျိုးသမီး ၁၀၀၀ ကျော်ကိုမဲစစ်ပြီးသည့်နောက်သုတေသီများက vibrator အသုံးပြုသူအများစုသည် vibrator အသုံးပြုခြင်းမှဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမခံစားရဟုပြောကြားခဲ့သည်။ [ဤဆောင်းပါးကိုလွှင့်တင်ပြီးနောက်ဤစာမျက်နှာနှင့်အခြားစာမျက်နှာများမှထူးဆန်းစွာလမ်းကြောင်းလွဲသွားခဲ့သည်။ ဟမ် ... ]
ဒီတုန်ခါမှုလေ့လာမှုရဲ့သိပ္ပံပညာမှာပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်စွဲမှတ်သွားတယ်။ ပထမ ဦး စွာ ကတစ်ခုတည်းကိုသာ Trojan တွေ, vibrator ရောင်းအားမှမြှုပ်နှံတစ်ခုလုံးကွဲပြားခြင်းနှင့်အတူကုမ္ပဏီအားဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ဒီမှာ Trojan ရဲ့ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ ဒီ "မကြုံစဖူးပြည့်စုံ vibrator လေ့လာမှု။ " အဲဒီမှာအကျိုးစီးပွား၏အဓိကပconflictိပက္ခ, ရှေးရှေး!
ဒုတိယအချက်မှာကပြည့်စုံပေမယ့်ဘာမှဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာချစ်သူများမှအများဆုံးစိတ်ဝင်စားမှု၏မေးခွန်းကိုမေးရန်ပျက်ကွက်: vibrator အသုံးပြုမှုလျော့နည်းပျြောမှေ့စတဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ toyless လိင်လုပ်ခဲ့သလား အဆိုပါသုတေသီများသူတို့ကိုယ်သူတို့, ဒီထင်ရှားတဲ့ပျက်ကွက်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် downplayed:
vibrator အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအထူးသဖြင့်နည်းလမ်းများကိုမှအမျိုးသမီးများ၏ habituate စေခြင်းငှါသမိုင်းယုံကြည်ချက် (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦး vibrator နှင့်အတူပိုမိုလွယ်ကူစွာအော်ဂဇင်ကြုံနေရနှင့်လျော့နည်းနိုင်အောင်တနာတစ်ဦးနှင့်အတူ) ပေးထားအနာဂတ်သုတေသနအတိုင်းအတာအမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုလေ့-သို့မဟုတ်ဖြစ်လာအရာကိုအကဲဖြတ်စဉ်းစားသင့်, တနည်း, မြှင့်တင်ရန်အတွက်စပ်လျဉ်းအသုံးပြုမှုကို vibrator ရန်။
အရုပ်မပါသောလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကလိင်ကစားစရာနှင့်ဆိုင်သောပြproblemsနာများအကြောင်းစိတ်ကူးသည်“ သမိုင်းဝင်ယုံကြည်ချက်” မျှသာဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ထို့အပြင်စာဖတ်သူများသည်သုတေသီများသည်ဤသမိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဤအရေးကြီးသောမေးခွန်းကိုဘယ်သောအခါမျှမမေးခဲ့ပါကလေ့လာမှုအဆုံးသတ်ကိုမဖတ်ရသေးပါကစာဖတ်သူများနားလည်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကိုပြု လိင်အင်္ဂါထုံ (အဖြစ်ယားယံ, နာကျင်မှု, မျက်ရည်နှင့်ဖြတ်တောက်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်း) အကြောင်းကိုမေးကြည့်ပါ။
ထို့ကြောင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်စာဖတ်သူသည်လိင်မှုပြုခြင်းတွင်တုန့်ပြန်မှုလျော့နည်းလာခြင်းကို“ ထုံခြင်း” အမျိုးအစားတွင်ဖော်ပြထားသည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ မဟုတ်ပါ။
သုတေသီများသည်သူတို့၏အနုစိတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်အဓိကမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေဆိုရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသော်လည်း“ ထုံခြင်း” သည်တုန်ခါမှုအတွက်အသုံးများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်တွင်သုံးစွဲသူများ၏စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ၁၆.၅% သည် numbness ကို vibrator အသုံးပြုခြင်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်, မ vibrator အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်?
အဘယ်သူမျှမသေးသိတယ်။ အခြေအနေအရ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်တို့သာမန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့သူတို့ရဲ့ vibrators ့လာဖို့သူအမြိုးသမီးမြား၏သို့ရာတွင်အကောင့်ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
အခြားအနိမိတျဆိုးအချက်ပြမှုများလည်းရှိပါတယ်။ ဘယ်တော့လဲ သုတေသီများနေရာ၌ရှိနေသော်လည်း 19 vibrator အသုံးပြုသူအသစ်များ၊ “ အမျိုးသမီးတွေဟာ vibrator ကိုစတင်သုံးစွဲတဲ့အခါသူတို့ရဲ့နှိုးဆွမှုနှင့်အော်ဂဇင်တုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲမှုအကြောင်းအများကြီးပြောခဲ့သည်။ …ထူးခြားသည်မှာအမျိုးသမီးရှစ်ယောက်ကတုန်ခါမှုကိုမှီခိုရန်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းတိုက်ရိုက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးသုံး ဦး သာလျှင်သူတို့၏လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာလိင်ဘဝများကိုတုန်ခါခြင်းဖြင့်မြှင့်တင်ခြင်းအကြောင်းအထူးပြောဆိုခဲ့သည်။
စကားမစပ်ယနေ့များစွာသောကဲ့သို့ ငယ်ရွယ်အထီး porn အသုံးပြုသူများသည်အမျိုးသမီးများသည်လည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသွေးဆောင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြောင်းသတင်းပို့ထားပါသည် သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်လျော့ကျလာ Partners တွေ့ဆုံ (မျှော်လင့်သာယာယီ) ကာလအတွင်း။ ဦးနှောက်ထဲမှာတစ်ဦးကခေါင်းမာ numbed အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု numbed အာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင်သကဲ့သို့အဆင်မပြေခြင်းနှင့်နစ်နာမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ဖြစ်ထွက်လှည့်စေနိုင်သည်။
စကားမစပ်, အ Kinsey vibrator သုတေသနကတည်းကအခြားထွက်လာသ သုတေသီများတွေ့ပြီ “ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကလိင်အင်္ဂါဇာတ်နိမ့်နိမ့်ကျမှုနှင့်ဆက်စပ်သည်၊ သို့သော်တုန်ခါသူနှင့်စအိုလိင်အော်ဂဇင်တို့၏ကြိမ်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားသည်။ ရှောင်ကြဉ်မှုပူးတွဲမှုသည် vibrator orgasms ကြိမ်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
တိုတိုမှာ, မဆိုမျိုးနာတာရှည် hyperstimulation နှင့်အတူအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုမှ sensitivity ကိုလျော့ချဖို့ပညာမဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ခြေလိုင်း: နာတာရှည် vibrator အသုံးပြုမှုအချို့သောအသုံးပြုသူများအတွက်တစ်လမ်းလမ်းတစ်နည်းနည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့တပ်မက်လိုချင်သောအ destination သည်သူတို့ကိုယူပြီးလျှင်မေးမြန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အားလုံးအထက်, သုတေသီများလိင်-ကစားစရာအသုံးပြုသူများသည်တိကျမှုမဝယ်ယူ-ကောက်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့သင်တန်းဇယားကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏သုတေသနပြုမှုအတွင်းအပြည့်အဝသမာဓိရှိကငျြ့သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခု၏နောက်ဆုံးလိုင်းအနည်းငယ်ကိုလေ့လာပြီးသုတေသီများမှတရားဝင်နိဂုံးချုပ်ထားသည်ဟုသင်မည်မျှမကြာခဏကြည့်ရှုခဲ့သနည်း။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်သက်တူရွယ်တူအချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုအလွန်အမင်းယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခုက "Inordinate" သုတေသီများ၏အံ့သြစရာအရေအတွက်က ထောင့်ဖြတ်၊ အချက်အလက်ချက်ပြုတ်ပါ။ "လက်တွေ့စိတ်ပညာသည်အကျင့်ပျက်မှုနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ "
သိပ္ပံပညာရှင်သုံး ဦး လျှင်တစ် ဦး သည်ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်မှဖိအားကြောင့်လေ့လာမှုတစ်ခု၏ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်ရလဒ်များပြောင်းလဲခြင်းစသည့်မေးခွန်းထုတ်စရာသုတေသနဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Hmmm …။
ပညာရေးဆိုင်ရာ sexologists ကြားတွင် vibrator ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးချက်
Sexologist ဖြေ အမျိုးသမီးများပုံမှန်တုန်ခါမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြားနည်းလမ်းများမှအော်ဂဇင်ကို၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုမကြာခဏဆိုသလို (ဒဏ္thာရီလော) ပြောဆိုချက်ကိုဖြေရှင်းသည့်သုတေသနရှိပါသလား။ ငါရှာတွေ့နိုင်ကြောင်း vibrator အသုံးပြုမှုအပေါ်လေ့လာမှုများရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖော်ပြထားသည်ပါဘူး။
Sexologist B က: ဒီဟာကတကယ်တမ်းဒေတာဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်။ အလိုလိုသိသည်မှာ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ကိုတစ်စုံတစ်ရာသောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုနှင့် 'နေသားတကျ' ဖြစ်လာသည်ဟုယူဆခြင်းဖြစ်သည်။ လူသားတစ် ဦး သည်တုန်ခါမှုလှုံ့ဆော်မှုကိုပုံတူပွားနိုင်သည်ကိုမေးခွန်းထုတ်စရာမရှိပါ။ တော်တော်ပြင်းထန်တယ် ထို့ကြောင့် အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်ပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုလိုအပ်ကြောင်း 'ဆုံးဖြတ်' ခဲ့လျှင်၎င်းမျှော်လင့်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းရှိနိုင်သည်။
Sexologist ကို C: ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ဒေတာကိုမသိပါ (ကျေးဇူးပြု၍ လူသိရှင်ကြားဝေမျှပါ) သို့သော်တုန်ခါမှုကိုမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသောအမျိုးသမီးများထံမှထိုတိုင်ကြားချက်ကိုသင်သေချာပေါက်ကြားနိုင်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကမှသာလျှင်သူမသည် (၂) လကြာလှုပ်ရှားမှုများကိုတုန်ခါမှုကိုရှောင်ရှားရန် (နှင့်လက်စွဲသို့မဟုတ်ပါတနာများလှုံ့ဆော်မှုဖြင့်သာအော်ဂဇင်များရှိခြင်း) ကိုကျော်ကြားသောယူကေလိင်လိင်ဘလော့ဂါမှတွေ့ရှိခဲ့သည်။ http://carasutra.co.uk/2013/04 / 60 ရက်ကြာ-Vibe-chastity-the-လမ်းကြောင်း-Back-To-လက်စွဲစာအုပ်-အော်ဂဇင် /
Sexologist: D: ကျနော်တို့ vibrator အသုံးပြုမှုအပေါ်အများကြီးဒေတာများပေမယ့်, ငါတို့အထူးသ (အချိန်ကျော်တစ်ဦး vibrator ၏နိဒါန်း, ပြီးတော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများဆနျးစစျကွောငျးကိုဥပမာ) ဒီမေးခှနျးကိုဖြေရှင်းရန်ကြောင်းအဘယ်သူအားမျှရှိသည်။
vibrator အသုံးပြုမှုသည်အမျိုးသမီးများကိုအခြားလိင်မှုကိစ္စများမှအော်ဂဇင်ကိုမခံစားရစေရန်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မထင်ပါ။ တိကျစွာငါ vibrator အသုံးပြုမှုအပါအဝင်သတင်းရင်းမြစ်အများအပြားထံမှအော်ဂဇင်ခံစားခဲ့ရသူအများအပြား, များစွာသောမိန်းမသိသည်။ ငါသည်လည်းတုန်ခါအသုံးပြုခြင်းအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောသတင်းရင်းမြစ်များမှအော်ဂဇင်ကိုခံစားနေရသောအမျိုးသမီးများကိုပြသသောအဆင်ပြေသောနမူနာမှအချက်အလက်များလည်းရှိသည်။
ငါသို့သော်စဉ်းစား - ဒါပေမယ့်သက်သေပြလို့မရပါဘူး - လူတွေကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအော်ဂဇင်လွှတ်ပေးရန်တစ်ခုတည်းအရင်းအမြစ်အပေါ်အားကိုးအခါတိုင်းသူတို့လှုံ့ဆော်မှု၏ပုံစံနှင့်နေသားတကျဖြစ်လာစေခြင်းငှါ၎င်း, ဆိုလိုသည်မှာ၊ လှုံ့ဆော်မှုအသစ် (သို့မဟုတ်အချို့သောအချိန်များတွင်သူတို့မမှီခိုသောဟောင်းနွမ်းမှုတစ်ခု) ဖြင့်တင်ပြသည့်အခါ၎င်းမှအော်ဂဇင်ကိုခံစားရရန်ထိုရစ်သမ်ကိုပြန်ရရန်ဆိုလိုသည်။ လှုံ့ဆော်မှုအသစ် (သို့မဟုတ်အဟောင်း၊ အသုံးမပြုခြင်း) နှင့်တုံ့ပြန်မှုနှေးနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သွားပြီဟုမဆိုလိုပါ။ ဒီဟာကိုတုန်ခါမှုအတွက်ကန့်သတ်ထားတယ်လို့မထင်ပါဘူး ထပ်တလဲလဲပြောရလျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုမိန်းမများ၊ အမျိုးသားများနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတွေ့မြင်ခဲ့ဖူးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်လိင်အင်္ဂါမှလိင်အင်္ဂါမှပုံမှန်အော်ဂဇင်ကိုရရှိသော်လည်း၊ နှုတ်ဖြင့်လိင် (သို့) အသက်အရွယ်မရွေးရဖူးသူ၊ Orgasm ကနေဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ ယောနိလိင်သည်အခြား orgasms များမှချို့ယွင်းချက်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ လူတွေဟာတစ်ခါတစ်ရံမှာအချို့သောအပြုအမူများနှင့်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိကြသည်။
Sexologist အီး: ငါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေပေးပြီးငါလိုနှစ်ပေါင်းများစွာ 120v (wall in the vibrator) vibrator ကိုသုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးအုပ်စုအနည်းငယ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်လွယ်လွယ်ကူကူလာနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရဲ့တုန်ခါမှုကိုဘာမှမစွန့်လွှတ်ဘူး။ အထူးသဖြင့် multiorgasmic အမျိုးသမီးများအတွက်ရေရှည်တုန်ခါမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မည်သည့်ပြcauseနာမျှမဖြစ်စေနိုင်ပါ။ ထိုအခါမူကား၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနှစ်သက်ကြသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ်စုံတစ်ရာမှားယွင်းနေသည်။
Sexologist က F: အယူအဆ - ယောက်ျားများအကြားတွင်အကြီးအကျယ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိရန်တွန်းအားတစ်ခုတည်းကိုသာအမြဲတမ်းအသုံးပြုသောအမျိုးသားများ၊ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဖက်တည်းအနေအထားတွင်တစ်သမတ်တည်းအမြန်နှုန်းနှင့်စည်းချက်အတိုင်းအတာအထိချောမွေ့သောပမာဏနှင့်အတူအော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိရန်၊ အခြားနည်းများဖြင့်အော်ဂဇင်ကိုရောက်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။